Saturday, 02 June 2012 18:33	नागरिक
मोटरसाइकल काठमाडौंको आफ्नै सवारी हो। यो वास्तवमै काठमाडौँको जीवनको प्रतीक हो। काठमाडौँका प्रायः सबै घरमा सोख र आवश्यकताले मोटर साइकल राख्ने गरिन्छ। केटाहरूलाई केटी फकाउन, पुरोहितलाई यजमान रिझाउन, पसलेलाई सामान ओसार्न र अड्कोपड्कोमा मानिसलाई गन्तव्यमा पुर्‍याउन मोटरसाइकलको महत्वपूर्ण भूमिका छ। काठमाडौँमा बाइकको लोकप्रियता र यससँग जोडिएका समस्याहरूको विवरण संगीता श्रेष्ठबाट :
Saturday, 02 June 2012 18:29	नागरिक
गायिका अञ्जु पन्तको जिन्दगी एकदमै उतारचढावपूर्ण छ। निकै व्यस्त हुन्छिन् अञ्जु। उस्तै परे दिनमा सातवटासम्म गीत गाउँछिन्। उनका गीत जति चर्चित छन्, उनको निजी जिन्दगीका विभिन्न आयाम पनि उत्तिकै चर्चित छन्। चर्चा र हल्लाहरूको स्पटलाइटमा हुन्छिन् उनी। शुक्रवार संवाददाता स्वरूप आचार्यले उनको गायन र जिन्दगीका बारेमा गरेको संवादः
Saturday, 02 June 2012 18:23	नागरिक
किशोर नेपाल- प्रिय विनिता, तिमी कान्तिपुरमा छैनौ र फोन सम्पर्कमा पनि छैनौ। तिमीले पन्ध्र दिनदेखि फेसबुक अपडेट गरेकी पनि छैनौ। टि्वटरमा टि्वटेकी पनि छैनौ। सुटिङमा गोरखा जान्छु भनेकी थियौ। कतै गोरखाली राजाको दरबारमा त छिरिनौ? सुटिङ गर्दागर्दै कतै हुटिङमा त परिनौ?
Thursday, 24 May 2012 16:24	नागरिक
'हलिउडसँग डराउँदैन बलिउड'
Thursday, 24 May 2012 16:08	नागरिक
'मर्डर' र 'ग्याङस्टर'जस्ता हिट हिन्दी फिल्मका निर्देशक अनुराग बसु अघिल्लो हप्ता काठमाडौँ आएका थिए। प्रयोगवादी फिल्म 'लाइफ इन अ मेट्रो'ले प्रचुर प्रशंसा बटुले पनि बक्स अफिसमा सफल नभएको उनी स्विकार्छन्। उनी निर्देशित 'काइट्स' बलिउडमा फ्लप भए पनि ओभरसिजमा राम्रो चलेको फिल्म थियो।
सेतो कमिजको सद्‍भाव
Thursday, 24 May 2012 16:02	नागरिक
किशोर नेपाल- रायनाले विनितालाई टेक्स्ट गरी, 'हेई विनिता आर यू हिन्दू अर क्रिस्चियन?' एकैछिनपछि जवाफ आयो, 'ह्वाट नन्सेन्स!' रायनाले मन थाम्न सकिन। विनितालाई कल गरी र भनी, 'अहिले यहाँ मेरा घरअगाडि हिन्दूहरूको विशाल जुलुस आइरहेको छ। एकछिनपछि क्रिस्चियनको आउँछ रे। आई एम कन्फ्युज्ड ह्वाट आई एम।'
मिस नेपालमा 'म्याच फिक्सिङ'
Friday, 11 May 2012 03:04	नागरिक
(48 votes, average 4.33 out of 5)